कसरी एक वेटरले सचिनको ब्याटिङ सुधार्न मद्दत गरे ? | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
कसरी एक वेटरले सचिनको ब्याटिङ सुधार्न मद्दत गरे ?
मुम्बई – सचिन तेन्दुल्कर करोडौँ क्रिकेट प्रेमीका लागि प्रेरणा छन् । उनको विश्व किर्तिमानहरु त छँदै छन्, भारतीय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तानको ब्याटिङ गर्ने शैली र अनुशासन धेरै युवा खेलाडीहरुका लागि शिक्षा हुने गरेको छ ।
भारतका वर्तमान कप्तान र सम्भवतः अहिलेका सबैभन्दा उत्कृष्ट ब्याटसम्यान विराट कोहलीले पनि धेरै पटक कसरी इंग्ल्याण्डको भ्रमणको क्रममा पटक–पटक आफू असफल हुँदा सचिनले ब्याटिङ शैली सुधार्न मद्दत गरेको कुरा सुनाएका छन् ।
यस्ता महान् ब्याटसम्यानलाई पनि एक सामान्य वेटरले ब्याटिङ सुधार्न मद्दत गरेको कुरा भने धेरैले नपत्याउन सक्छन् ।
तर, एकपटक जब सचिन चेन्नाइको एक होटलमा थिए, एक वेटर आएर उनलाई उनको ब्याटको स्वीङ सुधार्न सुझाव दिएका थिए । जुन तेन्दुलरको भनाईमा काम पनि गर्यो ।
‘यदी तपाइँ खुला दिमागले सोच्नुभयो भने तपाइँ धेरै कुरा विकास गर्न सक्नुहुन्छ । एकपटक चेन्नाईमा एक वेटर आएर मलाई भने – यदी तपाइँ रिसाउनुहुन्न भने म एउटा कुरा भनुँ । मैले हुन्छ भने । उले मलाई मेरो एल्बो गार्डले मेरो ब्याटको स्विङमा असर गरिरहेको बताए । ऊ शत प्रतिशत सही थियो,’ तेन्दुल्करले भने ।
तेन्दुल्करले उनको सुझावलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो एल्बो गार्डको डिजाइन परिवर्तन गर्न लगाए । ‘मलाई केही असहज त मुस हुन्थ्यो । तर, मैले कहिले पनि के कारणले भन्ने सोचिन । जब बलले गार्डमा लाग्थ्यो मलाई निकै दुख्थ्यो । त्यसपछि मैले त्यहाँ राखिने प्याडिङ थप गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस गरेँ,’ उनले भने ।
‘मैले तत्कालै त्यसको डिजाइन परिवर्तन गर्न लगाए । र, त्यसले फाइदमा पनि गर्यो । हाम्रो देशमा पानवालादेखि कम्पनीका सिइओले तपाइँलाई सुझाव दिन्छन् । त्यसता सुझाव प्रति आफू सँधै खुला रहनुपर्छ,’ तेन्दुलकरले भने ।-एजेन्सी
1/31/2017 12:13:00 PM